Iridda caadiga ah ee loo yaqaan 'IP' 192.168.0.1 waa kaas oo ay adeegsadaan router-yada oo ay weheliyaan modem sida router D-Link oo ah cinwaanka asalka ah ee IP-ka si loogu soo galo qunsulka maamulka. Si loo habeeyo nidaamyada horumarsan iyo aasaasiga ah ee 192.168.0.1 waa la isticmaali karaa.
192.168.0.1 Maamulka Galitaanka
Talaabooyinka Lagu Soo Galo IP 192.168.0.1
Haddii cinwaanka IP-ga ee loo yaqaan 'Modem / Internet Router' uu yahay 192.168.0.1 xaaladdaas, shaki la'aan waad u isticmaali kartaa inaad ku gasho qunsuliyadda qaabeynta sidoo kale Modem / Router-kaaga oo xakameynaya Nidaamka Internetka. Si fudud in login galay 192.168.0.1, raac tilmaamaha hoos ku qoran
Hubso in qalabku ku xiran yahay nidaamka korantada Ethernet ama silig la'aan.
Hadda fur web browserka aad u adeegsato marinka internetka.
Cinwaanka cinwaanka, ku qor http://192.168.0.1 or 192.168.0.1.
Bogga soo galida kumbuyuutarkaaga iyo waliba modemka ayaa ka soo muuqan doona shaashadda.
Soo gudbi Ids-ga soo galitaanka ee caadiga ah sida magaca isticmaalaha oo lagu daro lambarka sirta ah ee loogu talagalay bogga qaabeynta router-kaaga.
Daqiiqada aad soo gudbisay diiwaanka gelitaanka, waxaad ku gali doontaa bogga qaabeynta marka lagu daro waxaad ogaan doontaa sida loo sameeyo beddelka la doonayo.
Awoodin inaad ilaaliso warbixinta faahfaahinta soo galitaanka ee kor ku xusan ereyada muhiimka ah?
Baadhitaanka buugyaraha tilmaamaha
Haddii aad ku guuldareysatay inaad dib u soo ceshato aqoonsiga gelitaanka ee 192.168.0.1 kadib waa inaad baarto Buugga ama Sanduuqa router-ka. Intaa waxaa dheer, waa inaad ka hubisaa liiska router-ka asalka ah ee adeegsadaha iyo sidoo kale passkey-ga router-yada.
Dib u deji Router-ka
Haddii aad wax ka beddeshay faahfaahinta gelitaanka caadiga ah ee router-ka oo aad iska indhatirtay xilligaas habka ugu sarreeya waa in lagu soo laabto si loo soo celiyo waa dib-u-dejiye router ah oo leh nidaamyo go'an oo runtii dib ugu soo celiya dhammaan dib-u-habeynta mar labaad. Dib u dejinta router:
Qabso shey fiiqan sida caday ama Pin oo isku day inaad ka hesho dib udajinta dib udajinta ee router-yada gadaal.
Xilliga aad aragtay isbeddel yar oo sir ah. Riix oo ku hay badhanka qiyaastii 15-20 sekan adoo shey tilmaamaya.
Tani waxay dib ugu soo celin doontaa dhammaan dib-u-habeyntii mar kale dib ugu noqoshada goobaha aasaasiga ah oo ay weheliso magacyada / furaha ereyada aad beddeshay Marka hadda waxaad awood u yeelan doontaa inaad ku gasho oggolaanshaha gelitaanka caadiga ah.
Wadarta IP-yada shaqsiyadeed waxay leeyihiin ku dhowaad 17.9 milyan cinwaanno kala duwan, dhammaantoodna waxaa loo qoondeeyay inay adeegsadaan shabakadaha gaarka loo leeyahay. Sidaa darteed, IP-ga gaarka loo leeyahay ee router looma baahna inuu noqdo mid gaar ah.
Dhammaan qalabka ku jira shabakadda wuxuu routerku u qoondeeyay cinwaan IP-ga ah, ha ahaato aasaas heer ganacsi ah ama shabakad yar oo qoys. Dhammaan qalabka ku jira nidaamka waxay kuxiran karaan qalab kale oo nidaamka ah oo leh IP-gaan shaqsiyeed.
Si kastaba ha noqotee, cinwaanka IP-ga ee gaarka loo leeyahay ma geli karo shabakadda. Cinwaanada IP-ga ee shaqsi ahaaneed waa in lagu biiriyaa adeeg bixiyaha internetka, tusaale ahaan, Comcast, Spectrum ama AT&T. Marka hadda, dhammaan aaladaha ku soo biiray internetka toos uma aha, markii hore waxay ku xirmayaan nidaamka, kaas oo ku xiran internetka, markii dambena ku xirmaya internetka weyn.